Ama-Beach Front Feet eSand, Ocean View, 1 BR 1BA - I-Airbnb
Ama-Beach Front Feet eSand, Ocean View, 1 BR 1BA
Provincia de Guanacaste, i-Costa Rica
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-David
Jabulela ukuhlala ngasolwandle, ukubukeka okuhle nokuthamela ilanga ngokusuka ethala lakho langasese, uvulande noma indawo yokubhukuda! Leli fulethi elihle elinekamelo lokulala elingu-1 linombhede omkhulu, igumbi lokugezela elingaphakathi, ikhishi linendawo yokudlela isidlo sasekuseni enabantu abane futhi linazo zonke izinto zokupheka ozidingayo ukuze ujabulele ukudla ekhaya. Uzoba nendawo yokuhlala evulekile nethala elimboziwe ukuze ujabulele ukubukeka okuhle kolwandle kweziqhingi zase-Catalina, i-Flamingo Marina, ne-Potrero Bay. Ihora elilodwa nje elifushane ukuya esikhumulweni sezindiza sase-Liberia.
Siyakwamukela ku-Pacific Beach Condo #11, ikhaya lakho elikude nasekhaya njengoba uvakasha ngesitayela e-Costa Rica enelanga, ejabulisayo. Le-condo enekamelo lokulala elilodwa yenza kube lula ngabantu abashadile ukuba bahambe futhi bajabulele indawo enhle engaphambi kolwandle noma i-honeymoon enhle e-Playa Potrero. Futhi uma kuyiholide elisebenzayo, sine-100 mbps WiFi elungele futhi sikulindile. I-condo inombhede omkhulu, igumbi lokugezela elinamakamelo amaningi, kanye namabonakude amabili anesikrini esicaba ukuze ujabulele ukubuka. Uma abangane bakho noma izingane zikujoyina, singaletha umatilasi omkhulu we-elekthronikhi nazo zonke izinto zombhede. Ukusuka kule condo ethokomele, uzojabulela ukubukwa kolwandle okumangalisayo kwe-Catalina Islands, i-Flamingo Marina, ne-Potrero Bay, futhi ubuke ukushona kwelanga okumangalisayo ngenkathi uhlezi kuvulandi wokubuka ulwandle. Ikhishi elikhulu , elivulekile elinamakhawunta e-granite nendawo yokudlela lenzela indawo enhle yokudlela, noma ungakhetha ukudla kuvulande. Ama-air conditioner agcina i-condo ipholile futhi ithokomele. Kunenqwaba yokupaka mahhala emotweni yakho, inqola yegalofu noma iyiphi indlela yokuhamba oyisebenzisile. Ehlelwe ngqo ogwini, ungavuka uye endleleni izinkawu ezenza ngayo imijikelo yazo yasekuseni, bese uya kwenye yezindawo zokudlela ezingu-6 zasolwandle ezinikeza ukudla kwasendaweni kwase-Costa Rica nokudla kwamazwe ngamazwe. Imakethe yezithelo zendawo elula (ukuhamba ngemizuzu engu-1) kanye nokudla (imizuzu engu-10) kuqhele ngebanga lezinyawo. Eduzane, jabulela umculo odlalwa bukhoma nokuphila kwasebusuku, i-yoga ngaphansi kwe-palapa kuze kube nomsindo wolwandle, ukubhucungwa komzimba olwandle, ukudoba kwezemidlalo, ukushona kwelanga, nokuningi. Kukhona into yokuhamba elula eya e-Condo usuka e-Liberia International Airport, futhi izimoto eziqashisayo zendawo zingathunyelwa ku-condo. Woza futhi ujabulele enye yezindawo ezinhle kakhulu ze-Blue!
4.97 · 106 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-106
Ukuthatha isikhathi sokuza konke e-Costa Rica bese ukungabi ogwini kungadumaza. Sinikeza izinyawo zakho esihlabathini phakathi nemizuzwana yokushiya i-condo yakho. Ungahamba futhi ebhishi futhi uzithole unezitolo eziningi zokudlela eziphambili ebhishi nama-bar ukuze ujabule nabanye ngebanga elifushane nje ukusuka ezindaweni zokufinyelela ebhishi. Futhi e-Costa Rica, amabhishi ayimpahla yomphakathi ngakho ungahlola kuze kube yilapho ufuna khona...I-Playa Potrero iphinde yaziwe ngokuthi i-Offless Beach.
Sihlala lapha emphakathini wendawo futhi siyatholakala ukuqinisekisa ukuthi unakho konke okudingayo ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Uma kwenzeka ufune ukuba nesiphuzo futhi ukhulume kabanzi ngaleli zwe elihle, singajabula kakhulu ukuchitha isikhathi esithe xaxa nawe. Siyazi futhi ngezindawo ezithile ezinhle zokudla uma ungafuni ukuba matasa kakhulu ekhishini.
Sihlala lapha emphakathini wendawo futhi siyatholakala ukuqinisekisa ukuthi unakho konke okudingayo ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Uma kwenzeka ufune ukuba nesiphuzo futhi ukhulu…